दूधमा चिनी घुलेर बसेझैं कांग्रेसभित्र मिलेर बस्नेछौं : सुनिल थापा :: Setopati
दूधमा चिनी घुलेर बसेझैं कांग्रेसभित्र मिलेर बस्नेछौं : सुनिल थापा
तस्बिर सौजन्य : सिद्धार्थ थापा।
मंगलबार दिउँसो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भीडभाड थियो।
कार्यालयको ढोकामा ज्वरो जाँच्दै हातमा सेनिटाइजर लगाएर मानिसहरू सभाहलभित्र प्रवेश गरे।
कांग्रेस पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू र पत्रकार लगायतलाई सभाहलभित्र छिर्न दिइएको थियो।
सभाहलभित्र आकर्षणको पात्र थिए, राप्रपाका संस्थापक अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल। राप्रपा छाडेर आएका नेताहरूसँगै थापा फ्लोरमा बसेका थिए।
कार्यक्रम सुरू गर्दै कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले थापालाई पार्टी सदस्यता दिन सभापति शेरबहादुर देउवा र माला लगाएर स्वागत गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरे।
देउवाले सदस्यता र पौडेलले माला लगाइदिएर राप्रपाका पूर्वमहामन्त्री थापालाई कांग्रेसमा स्वागत गर्दा सभाहलमा उपस्थित कांग्रेस र राप्रपा छाडेर आएका नेताहरूले ताली बजाए।
सदस्यता पाएपछि सुनिल थापाको बस्ने ठाउँ फेरियो।
उनी ड्यासमा उपसभापति विजयकुमार गच्छादार छेउ कुर्सीमा बसे।
राप्रपा छाडेर आएका ध्यानकृष्ण भट्टराई, विष्णु थापा, बाबुराम बस्नेत, वृज यादव, दीलिप राई, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, चतुर्मान विक, राम शाह लगायतलाई देउवाले सदस्यता र पौडेलले माला लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए।
यसपछि नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई समय दिइयो।
निधिले देउवाले सुनिल थापा लगायतलाई पार्टीमा ल्याउन आफूलाई जिम्मेवारी दिएअनुसार उक्त काम फत्ते गरेको बताए।
‘राप्रपा एकीकृत हुनुअगाडिसम्म पशुपति शम्सेर जवरालगायत नेतासँग पनि छलफल भएको थियो। तर त्यो सफल हुन सकेन। सुनिल थापालगायत साथीहरू भने राजतन्त्रका एजेन्डा छाडेर गणतन्त्रका एजेन्डामा हामीसँग सहकार्य गर्न आइपुग्नुभयो,’ निधिले भने।
राप्रपा छाडेर आएका बाराका वृज यादवले राप्रपाले जनजाति, मधेशी लगायतलाई नहेरेकोले कांग्रेस प्रवेश गर्नुपरेको बताए।
‘राप्रपाले जनजाति, मधेशी लगायतलाई हेर्दै हेरेन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस मधेशीलगायतको हकहितका पक्षमा छ। यसले शान्ति र विकास दिन्छ र अर्को चुनावमा दुई तिहाइ मत ल्याउँछ,’ यो सुनेर भाषण सुनिरहेकाहरूले ताली पिटे।
यसपछि बोल्ने पालो आयो सुनिल थापाको।
उनले कोटको खल्तीबाट लिखित भाषण निकाले।
नेताहरूलाई सम्बोधन गरेपछि उनले आफू कांग्रेस प्रवेश गर्न पाउँदा हर्षित भएको बताए।
उनले कथा सुनाउँदै थपे, ‘दूधमा चिनी घुलेर बसेझैं हामी कांग्रेसभित्र मिलेर बस्नेछौं।’
उनले पटकपटक बिपी र आफ्ना बाबु सूर्यबहादुर थापाका नाम लिएका थिए।
२०१० सालदेखि कांग्रेससँग टुटेको सम्बन्ध फेरि फर्किएको उनले बताए। ‘२०१० सालबाट म र मेरो परिवारको नाता कांग्रेससँग टुटेको थियो,’ थापाले भने, ‘२००८ सालमा मेरा बुवा कांग्रेस मोरङको कोषाध्यक्ष, २०१० सालमा धनकुटा सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेलादेखि टुटेको नाता आज जोड्न पाएँ निकै हर्षित छु,’ उनले भने।
उनले टुटेको साइनो अब राम्रोसँग जोडिने पनि बताए।
यसपछि उनले किन आफूले राप्रपा छाडेको भन्ने प्रसंग निकाले।
राप्रपाले सूर्यबहादुर थापाको सिद्धान्त छाड्दै गएको र अझै पनि राजतन्त्रकै वकालत गरेकोले आफूले उक्त पार्टी छाडेको उनको भनाइ छ।
थापा लगायतलाई स्वागत गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सभापति देउवाले थापासँग एउटै क्याबिनेटमा रहेर काम गरेको प्रसंग निकालेर भने, ‘उहाँ काम गर्न सक्ने, खट्न सक्ने नेता हो।’
राप्रपाका नेतालाई पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रममा कांग्रेसका शीर्ष नेता सबै उपस्थित थिए। तर कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र पूर्वमहामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला देखिएनन्।
कार्यक्रम सकिएपछि हामीले थापासँग कांग्रेस प्रवेश र भावी राजनीतिक योजनाबारे कुराकानी गरेका थियौं।
कांग्रेसमा किन प्रवेश गर्नुभयो?
कांग्रेससँग हाम्रो परिवारको २०१० सालदेखि सम्बन्ध टुटेको थियो। हामी आजदेखि कांग्रेस प्रवेश गरेर टुटेको सम्बन्ध गाँस्यौं।
कांग्रेससँग बुवा सूर्यबहादुर थापाले पनि पटक-पटक सहकार्य गर्नुभएको थियो। उहाँले नेपालमा अब कांग्रेसकै नेतृत्वमा बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकता छ भन्नु भएको थियो।
आजको मेरो प्रवेशले कांग्रेससँग टुटेकै ठाउँबाट सम्बन्ध सुरू हुन्छ।
कांग्रेसले कुन पद दिन्छु भनेको छ?
हेर्नुस् म पदका लागि कांग्रेस प्रवेश गरेको होइन। मेरो अनुभव र मैले गरेका कामहरूको मूल्यांकनमा सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ उहाँको भनिहाल्नुभयो उहाँकै मन्त्रिपरिषदमा बसेको हुनाले मेरो क्षमताको उहाँ आफैंले मूल्यांकन गर्नुहुन्छ।
सहमहामन्त्री दिने भन्ने सहमति छ रे त?
सहमति त अनेक पदका कुरा आएका छन्। हामी कांग्रेस प्रवेश गरेर थप ऊर्जा दिन खोजेको हो पदका लागि होइन। अधिनायकवादसँग लड्नका लागि लोकतान्त्रिक धारसँग उभिएको हो।
सिधा सिधा भन्नुस् न, सहमहामन्त्री ठीकै हुन्छ?
हो, ठीक त्यो ठीक भन्ने मैले भन्ने होइन। सभापतिज्यूले के भन्नुहुन्छ। यो पदका लागि भए त म राप्रपामै बस्थें। राप्रपाले मलाई डोकोभरि कै पद दिएको थियो।
छ महिनापछि कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ, के उठ्ने सोच छ?
भर्खंरै त प्रवेश गरें। अब बिस्तारै के गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ। कांग्रेसमा अधिवेशन अगाडि होमिएको कारण पनि भोलि आफू अधिवेशनमा पनि भाग लिएर अघि बढ्नका लागि हो।
भनेपछि पदाधिकारी लड्ने!
होइन, यसबारे छलफल हुँदैछ के लड्ने भनेर। भर्खरै पार्टीमा छिरेको छु गृहकार्य त गर्नुपर्‍यो नि।
अरू नेतालाई कसरी व्यवस्थापन होला?
आफ्नो क्षमताअनुसार राप्रपा छाडेर आउनुभएका साथीहरूको जिल्लादेखि केन्द्रसम्म व्यवस्थापन हुन्छ। आफ्नो हैसियत बोकेर साथीहरू कांग्रेसमा आउनुभएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १३, २०७७, ०८:४५:००